GAROOWE, Puntland - Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali [Gaas] iyo wafdigiisa ayaa maanta oo Isniin ah dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe, ee caasimadda Puntlanad, kadib safar shaqo oo uu ugu maqnaa magaalda Brussels ee Dalka Belgium.
Gaas ayaa magaaladda Brussels uga soo qeybgalay shirka arrimaha Soomaaliya, isagoo qeyb ka ahaa wafuuda ka kala socotay maamulada dalka ka jira dowladda Federaalka, saaxiibada beesha caalamka iyo Hay'ado caalami ah.
Gaas oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaardaha magalada Garowe isaga oo ka warbixiyey safarkiisa shaqo ee uu ugu maqnaa magaalda Brussels, ayaa sheegay inay kasoo baxeen Shirka qodobo dan u ah dalka Soomaaliya, iyo Puntland.
Safarka Gaas uu ku tagay dalka Belgium ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo uu wajahayo loolan siyaasadeed oo culus oo ku aadan doorashadda 2019, taasoo murashixiin badan ay ku eedeeyeen Musuqmaasuq iyo fadhiidnimo.
Inkastoo Brussels ka yiri ma ahi musharax , hadana waxaa la filayaa inuu kala cadeeyo mowqifkiisa ka hor doorashadda oo ka harsan mudo 5 bilood.
Gaas ayaa mudadii afarta sano ee lasoo dhaafay lagu eedeeyay in maamulkiisa ku fashilmay arrimaha amniga, dhaqaalaha oo sicir-barar xooggan uu ka taagnaa Puntland, musuq-maasuq iyo inuu hirgeliyo nidaamka dimuqraadiga ah iyo doorasho qof iyo cod ah.
Dhibaatooyinka xilligan ka taagan Puntland, ayaa waxaa kamid ah amniga, iyadoo ay ka dhaceen weeraro waaweyn oo Taariikhda aan horey uga dhicin kuwaasi oo uu kamid ahaa kii Af-Urur [8 June 2017], oo Askar badan lagu laayay.
Sidoo kale intii uu Madaxweyne Gaas xilka soo hayay, Somaliland ayaa qabsatay dhul horleh, oo Tuulada Tukaraq ay kamid tahay taasoo maamulka Muuse Biixi awood militeri kula wareegay 8-dii January 2018.
HOOS KA DAAWO MUUQAALKA SOO LAABASHADA GAAS: